68% yesaphulelo Clearly.ca Iikhuphoni kunye neeKhowudi zeVawutsha
Clearly.ca Iikhowudi zekhuphoni
I-40% isaphulelo kwiifreyimu ezipheleleyo Ngokucacileyo iikhowudi zekhuphoni. iiglasi kunye neelensi zonxibelelwano. Jonga ezethu iikhowudi zesaphulelo esihle sokugcina okhethekileyo kwizambatho zakho zamehlo! Fumana iiglasi zakho ezigqibeleleyo ezineesakhelo eziqala kwi- $ 9, kubandakanya iilensi zomoya oMgangatho ocacileyo. Ukuba ufuna abafowunelwa, sikwanikezela ngesiqinisekiso sokulingana kwamaxabiso. ...
Ukuya kwi-60% yesaphulelo Khetha iifreyimu + 30% yesaphulelo kuzo zonke iiLensi Ngokucacileyo.I-coupon ye-CA-iipesenti ezingama-25 isuse zonke iiglasi kubathengi abatsha Ukuqokelelwa kwamehlo kuya kuhlala kukuhle ekuphuculeni impilo yamehlo ngelixa uqinisekisa ukubonakala kwesitayile ukuba ukhetha iiglasi ezincomayo zexesha elitsha eCleary.ca.
Ukuya kwi-20% kwi-Lens yoQhagamshelwano ngaphezu kwe-$ 99 + yokuThunyelwa kwaMahala Iipesenti ezingama-50 kwisaphulelo sakho sokuqala ngokucacileyo.ca Ukuthenga w / clear.ca Ubhaliso. I-50% isuse iiglasi zokumiselwa kunye ne-15% isuswe kunxibelelwano + nokuhanjiswa simahla. Fumana le Deal. ngokucacileyo Iikhuphoni zaseCanada. Iipesenti ezingama-25.
I-$ 12 ivaliwe + Ukuthunyelwa kwamahhala kwii-odolo zoQhagamshelwano $99+ Uyihlangula njani ikhuphoni ecacileyo. Kukho ibhokisi ebhalwe 'Ngenisa ikhowudi yekhuphoni' kwiphepha lokujonga elicacileyo. Ikhuphoni le-cacile.ca kufuneka incanyathiselwe apho, emva koko ucofe iqhosha u '+' ukufaka isicelo. Ukuba ikhuphoni liphumelele ixabiso liya kuncitshiswa kwaye uya kubona umyalezo ophumeleleyo.
I-10% yokuthenga ngaphandle kweedola ezingama-99 + zokuHambisa simahla Malunga ne-Clear.ca Iikhuphoni ezisungulwe ngokucacileyo ngo-2000, zigxile ekuthengiseni iilensi zonxibelelwano kunye neiglasi ngamaxabiso afikelelekayo kuyo yonke iminyaka. Benza izitayile ezizodwa kunye nezakhelo zeelensi ezimiselweyo kunye nezibuko zelanga kwiimfashoni ezininzi.
Ukuya kuma-70% kwiifreyimu + ezingama-30% kwiiLens zokuhlaziya Izaphulelo ziphakathi kwe- $ 15 kunye nekhowudi yokucacisa yaseCanada okanye ikhuphoni. 30 Ngokucacileyo amatikiti eCanada ngoku kwiRetailMeNot.
I-$ 12 ivaliwe kwiiLensi zoQhagamshelwano Ngaphezu kwe-$ 99 + yokuThunyelwa kwaMahala Gcina i-avareji ye- $ 25 usebenzisa iKhowudi eQinisekisiweyo.ca kunye neekhowudi zokunyusa zikaJulayi, 2021. Fumana ngokucacileyo.ca kunye neekhowudi zekhuphoni. RetailEm.com -Hlawula iVenkile encinci, ivenkile yokuthengisa.
$15 Off Iiodolo zoQhagamshelwano Of $99+ Kuzo zonke iikhowudi zokunyusa ezicacileyo zeBOGO, jonga iiConsons.com ngaphambi kokuba uthenge. Unokubhalisela iincwadana ze-imeyile zeCoupons.com, ezakukugcina uposwe malunga nokuthengisa okucacileyo, Thenga i-One Get One Simahla, kunye neekhowudi zokukhuthaza ezizodwa.
Ukuphuculwa kweeLens ezingama-40% Fumana iikhuphoni zamva nje zika-Agasti 2021 kunye neekhowudi zokupasa ezisetyenziswe ngokuzenzekelayo ekuphumeni eCanada ecacileyo nakwezinye iivenkile ezingama-20,000 eziphezulu.
I-20% yeNtengo yokuThengwa kokuQala + yokuHambisa Simahla I-40% icinyiwe kunye nekhowudi yekhuphoni ecacileyo. Ikhowudi iyafumaneka kubathengi bexesha lokuqala kuphela. Gcina i-40% kwisibini sakho sokuqala kwiiglasi kwi-Clear.ca!
Ukuphuculwa kweeLens ezingama-35% Kunye nala ma-coupon aseCanada acacileyo kunye neekhowudi zokunyusa, uya kufumana kwakhona iGoodshop Cashback, enokusetyenziselwa ukuhlawulela ukuthengwa kwexesha elizayo. Ukuhlawulela iphetshana elicacileyo leCanada; Khuphela nje kwaye uncamathisele ikhowudi yenyuselo kwindawo efanelekileyo ngexesha lokuphuma, kwaye isaphulelo sakho siya kusetyenziswa ngokuzenzekelayo.
Yiya kwi-25% yesaphulelo kwiimveliso ezifanelekileyo Kulula kakhulu ukusebenzisa ikhowudi yekhuphoni ecacileyo.ca, khuphela ikhowudi yokukhuthaza okanye ikhowudi yesaphulelo kwibhodi yakho yokunamathisela kwaye uyisebenzise ngelixa ujonga. Ikhowudi yekhuphoni. Ezinye iiconcons ze-caca.ca zisebenza kuphela kwiimveliso ezithile (umzekelo: iiglasi zamehlo), ke qiniseka ukuba zonke izinto ezikwinqwelo yakho ziyafaneleka ngaphambi kokungenisa iodolo yakho.
$ 20 isaphulelo Ivenkile ekrelekrele kunye neekhowudi zeCadiscount ezicacileyo kunye neekhowudi zekhuphoni. Jonga ukhetho olubanzi lweeCa Ca ezahlukeneyo kunye nokuzifumana ngamaxabiso afanelekileyo.
Thatha ukuya kuthi ga kwi-25% ngeKhowudi Ngokucacileyo i-CA Coupons & Offers Sebenzisa ngokucacileyo iikhowudi zekhuphoni ze-CA kwaye ugcine isixa sakho esihle, njengoko ukonga kungowona mnqweno wabo bonke abathengi nakwezona ziphulelo zincinci zinokugcina imali eninzi. Ngaba ufuna ukwazi eyona ndlela yokugcina kwiimveliso ezicacileyo ze-CA?
Gcina iipesenti ezingama-25 kwiSaphulelo Ngokucacileyo.ca Iikhuphoni kunye neeNtengiselwano Fumana iiKhowudi eziCacisiweyo.ca zamva nje, iikhowudi zekhuphoni, kunye neKhowudi yokuPhucula ukusukela ngoJulayi ka-2021 apha: Ukufikelela ikhowudi yekhuphoni, Cofa ku "Reveal Coupon" kwaye ikhowudi iya kutyhilwa kwaye ikhutshelwe ngokuzenzekelayo kweyakho eqhotyoshwayo.
Gcina i-30% kuPhuculo lweLens Isibonelelo esitsha soMthengi esicacileyo: Iipesenti ezingama-25 isuswe kwisibini sakho sokuqala seGlasi kunye nokuHanjiswa kwaSimahla. UDealhack uqinisekise eli khuphoni ngoDisemba 18, 2020. USara uthe liyasebenza ukusukela nge-7/7/2021. ngoJulayi 7, 2021. U-Leslie uthe ikhuphoni lisebenza ngoJulayi 4, 2021. ngoJulayi 4, 2021.
Fumana isaphulelo se-35% kwizinto ezikhethiweyo Wamkelekile kwiphepha lethu elicacileyo lamakhuphoni, ujonge izaphulelo kunye nezikhuthazo zakutshanje ezingqinisisiweyo zeAgasti 2021. Namhlanje, kukho iitoni ezingama-35 ezicacileyo kunye nezaphulelo. Unokucoca ngokukhawuleza iikhowudi zokunyusa ezicacileyo zangoku ukuze ufumane izithembiso ezizodwa okanye eziqinisekisiweyo.
I-10% ye-Oda yeLens yoQhagamshelwano ye-99 yeedola Ngokuzingca indawo yaseKhanada yekhuphoni ebonelela ngeentengiso zamva nje, izaphulelo kunye neekhowudi zekhuphoni kwiivenkile ezahlukeneyo eCanada. Ukuhlaziywa imihla ngemihla ngeetoni ezintsha
I-10% ye-Oda yeLens yoQhagamshelwano ngaphezu kwe-99 yeedola Sineekhowudi ezingama-50 ngokucacileyo.ca iikhowudi zekhuphoni ukusukela ngo-Agasti 2021 Bamba amatikiti asimahla kwaye ugcine imali. Idili yamva nje ngama-30% ekhutshwe i-Eyewear @ Ngokucacileyo iikhowudi zekhuphoni zaseCanada.
Amanqaku ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-5 ngesaphulelo kwiKhowudi yesaphulelo Kwiphepha lekhuphoni le-cacile.ca, uyakufumana ii-BOGO zamva nje, ukuthengisa, ukuthengisa, kunye neentengiso. Kwaye apho unokufumana imali kwakhona (i-3% ukuya kwi-6% okanye nangaphezulu) kwi-Clealry.ca yakho yokuthenga. Kwaye apho unokufumana imali kwakhona (i-3% ukuya kwi-6% okanye nangaphezulu) kwi-Clealry.ca yakho yokuthenga.
Fumana ukuHambisa simahla kwii-Odolo ezixabisa i-99 okanye ngaphezulu Thenga iiglasi ezi-1 ufumane is-1 simahla. Siyakuqinisekisa ngexabiso eliphantsi kwiilensi zonxibelelwano. Ukuhambisa ngokukhawuleza kuyo yonke indawo eCanada.
Yonwabela i-10% yeSaphulelo kwi-Odolo yakho Fumanisa le Khowudi yeKhowudi ecacileyo.ca ye-2020 ukufumana isaphulelo se-15% kwinto oyithengileyo kuqala. Bhalisa ngoku ukuze ubambe le ntengiso. Ngaphantsi
Fumana i-35% yesaphulelo kuHlaziyo lweLens Fumana ikhuphoni CLEARLYFS15. Ikhowudi yekhuphoni. I-15% icinyiwe. IKhowudi yokuNxibelelana ngokucacileyo yoNxibelelwano-Fumana i-15% kwiilensi zonxibelelwano kunye nokuthumela simahla ngeodolo ngaphezulu kwe- $ 99 kangangexesha elimiselweyo. Fumana iilensi zonxibelelwano ezifanelekileyo ngeqhezu lamaxabiso usebenzisa le khowudi yoQhakamshelwano loQhakamshelwano ngokucacileyo nge-15% isaphulelo kunye nokuthumela simahla xa uchitha i- $ 99 okanye nangaphezulu.
Fumana isaphulelo se-15% xa uchitha i- $ 99 okanye nangaphezulu Yonwabela iSaphulelo seCacacileyo.ca, ikhowudi yekhuphoni kunye neKhowudi yokuThengisa iipesenti ezingama-75 isaphulelo + ngakumbi ku-Cacisa.ca ngokuqinisekisiweyo Fumana leKhowudi yeKhuphoni ukuze ugcine ama-40% kwi-Clear.ca kwii-Lens Upgrades.
Thatha ukuya kuthi ga kwi-25% ngeSaphulelo Malunga neConcons ezicacileyo. Wamkelekile kwiRefermate.com, apho unokunyusa ukonga kwakho ngelixa ujonge iikhowudi zokucacisa.ca. Sihlolisise iwebhu kwaye safumana i-37 ecacileyo.ca Iikhuphoni zango-Agasti, 2021 Siqinisekile ukuba sinazo zonke izivumelwano ze-Clear.ca.
Vuka ukuya kwi-40% yesaphulelo kuHlaziyo lweLens Ngokucacileyo abafowunelwa yindawo yokuya kwiilensi eziphezulu kunye neefreyimu ngamaxabiso afikelelekayo. Ivenkile yeAvuvue, iRay-Ban, iBosch kunye neLomb, kunye nokunye okunxulumene nezivumelwano ezimangalisayo kwi-Word.ca. Ngaphezulu kweentengiso ezinkulu ...
I-15% yokuKhuphela iOrder yakho yoNxibelelwano + yokuHambisa simahla Zaziwa ngoku Iikhuphoni ezicacileyo. Isaphulelo. Inkcazo. Iphelelwa lixesha. I-10% icinyiwe. I-10% icinyiwe kuwo nawuphi na umyalelo. ---. $ 10 Cinyiwe. Iidola ezili-10 kwiilensi zoNxibelelwano ngaphezulu kwe- $ 99.
I-15% yokuThintela iiLens yeeMiyalelo yee- $ 99 + Ngokucacileyo.ca Iikhuphoni- Iikhowudi zekhuphoni zesaphulelo kunye neekhowudi zokunyusa ... Cima Zonke iiLens zokuThenga ngaphezulu .. Sebenzisa ikhowudi yokucacisa ngokucacileyo.ca: CLEARL .. 13 eyona nto icacileyo. ca.
Fumana ama-10 eedola kwii-Orders ezixabisa i-89 yeedola okanye nangaphezulu I-100% yasimahla yokuNxibelelana neKhowudi yeekhowudi kunye nezikhuphoni ngo-2021: Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70.
Gcina i-15% kwi-Odolo yakho iphela Intengiso ⭐ Ngokucacileyo.ca ukuThengiswa koSuku lweSikhumbuzo 2021 ⭐. Ukuthengisa ngoSuku lweSikhumbuzo, ukuthengisa ngeempelaveki, amatikiti, amadili, kunye neekhowudi zokunyusa, landela nje eli khonkco! Kwaye ngelixa ulapho, bhalisela ii-imeyile ukufumana izaphulelo kunye nokunye, kanye kwi-inbox yakho.
Fumana iSipili esiMahala seYSL yobuhle kwi $25+ yokuthenga Ngokucacileyo.ca Iikhuphoni ukuya kuthi ga kwi-40% isaphulelo ngoMeyi 2021. 40% isaphulelo (kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo) Ikhuphoni yeFace.ca kufuneka incanyathiselwe apho, emva koko ucofe iqhosha u '+' ukufaka isicelo. Ukuba ikhuphoni liphumelele ixabiso liya kuncitshiswa kwaye uya kubona umyalezo ophumeleleyo. Ezinye iiKhuphoni zinokunikezela ngesaphulelo esiphezulu, zama ezinye zazo. Ngokucacileyo.ca yiCanada ...
Inqaku le-15% likhutshiwe ngekhowudi yekhuphoni ngokucacileyo.ca Fumana zonke iikhowudi zekhuphoni zamva nje, isaphulelo kunye neKhowudi yokuThengisa. Ngaphezulu kwe-1,000,000 XNUMX + Iikhuphoni ezihlaziywa mihla le
Ukuya kwi-20% yesaphulelo + Ukuthunyelwa kwamahala. Ivenkile e-Clear.ca, khangela ii-Coupons kunye nee-Deons ezingama-22 kwaye ufumane ukuya kuthi ga kwi-6% yeCash Back ngeSwagbucks. Isicwangciso esiphezulu ngokucacileyo.ca: Yongeza iiLensi zokulwa inkungu nakweyiphi na iiglasi. Fumana ibhonasi eyi- $ 10 yokutyikitya ii-Swagbucks!
Fumana ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 xa usebenzisa ikhowudi yokuThengisa Fumana isongezelelo se-10% ngeli Phetshana lesaphulelo kwiiHamleys.Ukufumana okungaphezulu nge-10% kuzo zonke izinto ezikule Coupon yeSaphulelo eBanggood Nyuka ukuya kuma-70% kwiZakhelo + ezingama-40% kwiiLense ngokucacileyo ngoku ukuba kuleKhowudi yeKhuphoni Fumana i-Flat 20% Ukuya kwi-Igp Pay usebenzisa iKhadi lakho leBhanki le-Hdfc Fumana i-66% eyongezelelweyo kwi-3d Cr-10 Max Desktop 3d Printer Diy Kit, limited Offers $ 685.99 With This Discon Coupon At Tomtop ...
Yonwabela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-20 ngeKhowudi yokuThengisa Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-15 kwiMpilo noBuhle Ungaze wophule ibhanki ngeyona ndawo idumileyo ye-15% Ikhutshiwe Ngokucacileyo Ikhuphoni le-CA. Cofa ukugcina! 07/28/2021. 20 ESEBENZISIWE. IMPUMELELO. 100%. Fumana ikhowudi. I-20 $ icinyiwe. ukujongana. Iidola ezingama-20 kwi-Everclear Lense kwii-Odolo ze- $ 99 + yokuhambisa ngenqanawa lixabiso elongezelelweyo. Unikelo lusebenza kwimveliso yeelensi ezinamaxabiso kuphela. Ayinakudityaniswa ne ...
Thatha ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-15 ngeKhowudi yokuThengisa Ivenkile e-Clear.ca ngoku usebenzisa eli phetshana kwaye ufumane amaxabiso angama-25% kwixabiso lokuthenga kwakho iiFreyimu kunye nokwehla okumangalisayo kwama-25% ekuthengeni kwakho iiLense! Ndwendwela ngokucacileyo.ca namhlanje ngeentengiso ezimangalisayo! Ngokucacileyo.ca - iipesenti ezingama-25 kwiifreyimu + ezingama-25% kwi-oda yeelensi
I-20 yeedola yokuNxibelelana neMiyalelo yeeLens yee- $ 119 + ENTSHA. Gcina imali eninzi kunye nevenkile enkulu malunga nokushicilelwa kwamakhuphoni, iikhowudi zokunyusa, isaphulelo kunye neentengiso. Inikezwe ziiKhowudi zeKhuphoni kunye neKhowudi
25% Off Cooper Vision Abafowunelwa
25% Isaphulelo kuBafowunelwa beAlcon
Ukuya kwi-20% kwi-Order yoQhagamshelwano ye-99 ye-$ + yokuThunyelwa kwaMahala
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 kwiifreyimu ezingama-40% kwiLense yeeLens
Gcina i-30% Ekukhetheni iifreyimu + iiLensi ezineKhowudi yokuKhuthaza
Thatha i-20% kwi-Eyewear ngeKhowudi yokuKhuthaza
Thatha ukuya kuthi ga kwi-10% ngeKhowudi
Amanqaku ama-10 eedola ngaphandle kwekhowudi
Fumana i-20 yeedola kwiLens yoQhagamshelwano exabisa i-$119 okanye ngaphezulu
Gcina ama-35% kwizakhelo | Gcina ama-20% kwiilensi
Iipesenti ezingama-35 zingasebenzi kwiifreyimu
Iipesenti ezingama-25 zigqibile ngababini abagqibileyo beglasi
I-35% icinyiwe kwiiglasi ze-EB zeerandi $ 49 +
Clearly.ca is rated 4.6 / 5.0 from 230 reviews.